Mogadishu Journal » WAR DEG DEG AH: Lukaku ayaa Chelsea kaga soo biiray Inter heshiis rikoor kooxeed ah
Romelu Lukaku ayaa ku soo laabtay Chelsea ka dib markii kooxda heysata horyaalka Yurub ay weeraryahanka reer Belgium kala soo wareegtay Inter lacag dhan £ 97.5million (€ 115m).
Ka dib markii ay ku guuleysatay Champions League, Chelsea ayaa baadi goob ugu jirtay inay sii xoojiso kooxda Thomas Tuchel iyadoo la soo wareegtay weeraryahan heer sare ah.
Erling Haaland wuxuu ahaa bartilmaameed, laakiin Chelsea ayaa aragtay qaabkeeda Borussia Dortmund, oo aan u baahnayn inay iska iibiso xiddiga reer Norway ka dib markii ay ad 85m (£ 72.6m) ku soo qaateen Jadon Sancho.
Chelsea ayaa markii dambe u weecatay diiradeeda Lukaku, kaasoo Inter u horseeday hanashada horyaalkoodii ugu horreeyay ee Serie A muddo toban sano ah xilli ciyaareedkii hore, isagoo dhaliyay 24 gool oo horyaalka ah.
Dalabkii hore ayaa la sheegay in la diiday laakiin, ka dib markii Lukaku - oo hore u sheegtay inuu doonayo inuu sii joogo San Siro oo uu ka hoos ciyaaro tababaraha cusub ee Simone Inzaghi - ayaa tilmaamay inuu doonayo inuu baxo, Inter ayaa dooratay inay iibiso hantideeda qaaliga ah.
“Waan ku faraxsanahay waana ku faraxsanahay inaan ku soo laabto kooxdan cajiibka ah,” ayuu Lukaku u sheegay website -ka Chelsea. “Safar dheer bay ii ahayd: waxaan halkan u imid aniga oo caruur ah oo wax badan baran lahaa, hadda waxaan la soo noqonayaa waayo -aragnimo badan iyo qaangaar.
“Xiriirka aan la leeyahay kooxdan micno weyn bay ii leedahay, sidaad ogtahay, waxaan taageeray Chelsea anigoo caruur ah hadda inaan ku soo laabto oo aan isku dayo inaan ka caawiyo inay ku guuleystaan ​​koobab badan waa dareen la yaab leh”.
Chelsea sinaba uma la soo saxiixan 28 jirkaan, si kastaba ha ahaatee, qiimaha lagu soo waramayo waa rikoor kooxeed.
Waxay sidoo kale ka hooseysaa kaliya £ 2.5m rikoorka suuqa kala iibsiga ee Ingiriiska oo uu dhigay Jack Grealish oo u wareegay Manchester City. Lukaku ayaa saxiixay heshiis shan sano ah si uu dib ugu laabto Stamford Bridge.
Bixitaanka Lukaku waxay dhabar jab ku noqon doontaa Inter laakiin waxay ka yareyneysaa qaar ka mid ah cadaadiskii maaliyadeed ee kooxda reer Talyaani, maadaama ay u baahnaayeen inay lacag ku urursadaan iibinta ciyaartoyga.
Achraf Hakimi ayaa ka tagay si uu ugu biiro Paris Saint-Germain, halka Lautaro Martinez sidoo kale loo arkay inuu ka tagi karo, in kasta oo Inter ay hubaal tahay inay ka xun tahay inay lumiso labada weeraryahan isla suuqa.
Lukaku ayaa si joogto ah ugu biiray kooxda Everton sanadkii 2014 kadib markii uu xilli ciyaareed amaah ah kula qaatay kooxda Toffees.
Wuxuu u saxiixay Blues isagoo da 'yar sanadkii 2011 isagoo ka yimid Anderlecht, inkasta oo safka kooxda koowaad uu xadidanaa ka hor inta uusan amaah ugu biirin West Brom.
Lukaku ayaa noqday ciyaaryahanka ugu goolasha badan Everton Premier League, isagoo shabaqa soo taabtay 68 jeer ka hor inta uusan ku biirin Manchester United £ 75m sanadkii 2017.
Inkasta oo uu bilow fiican ka bilaabay Old Trafford, haddana Lukaku wuxuu ku guul daraystay inuu helo qaab ciyaareedkiisii ​​ugu fiicnaa intii uu Jose Mourinho maamulayay. Ole Gunnar Solskjaer ayaa u oggolaaday inuu u dhaqaaqo Inter sannadka 2019, tallaabadaas oo dib u soo celisay waayihiisa ciyaareed.
Isagoo ku horumaray Antonio Conte, Lukaku ayaa hadda dib ugu biiray Chelsea isagoo ka mid ah xiddigaha ugu horreeya adduunka booskiisa.
Rooble oo Nairobi kula kulmay Cumar C/rashiid, Qalbi-dhagax & xubno kale.(Sawirro)